စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်ရန်နိုင်ငံတော်မော်ကွန်းတိုက် RayHaber | raillynews
ကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ရန်နိုင်ငံပိုင်မော်ကွန်းတိုက်၏ဥက္က;္ဌ၊ ၀ န်ထမ်းများကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမော်ကွန်းတိုက်ဥက္ကkara္ဌ၏အန်ကာကာနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ယူနစ်များသို့ခန့်အပ်ရန်ခန့်အပ်သည်။ Application များကို 2-13 ဒီဇင်ဘာ 2019 အကြားပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲနှင့်အတူပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပါးစပ်စာမေးပွဲနှင့်အတူ, Technician, Technician, အင်ဂျင်နီယာ, Dietitian နှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုဝန်ထမ်းရေးရာအလုပ်အကိုင်ပေးလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏နိုင်ငံတော်မော်ကွန်းတိုက်၏ဥက္ကဌသည်စုစုပေါင်း 76 ကန်ထရိုက် ၀ န်ထမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
1. အစိုးရ ၀ န်ထမ်းဥပဒေပုဒ်မ 657 အပိုဒ် (က) တွင်သတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းများရှိရန်၊
2. လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်မော်ကွန်းတိုက်သုတေသနတို့ကြောင့်အပြုသဘောဆောင်ရန်၊
3. နောက်ဆက်တွဲနံပါတ် -1 နံပါတ်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောသင်ကြားမှုအခြေအနေများကိုသယ်ဆောင်ရန်၊
4. 01 ဇန်နဝါရီ 2020 သည် 35 ၏အသက်မပြည့်သေး (မွေးဖွားသည့် 01.01.1985 နှင့်နောက်ပိုင်း)
5. အစိုးရ ၀ န်ထမ်းရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ (ခ) ကို OSYM 2018 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရသူများအတွက် KPSSP (3) ရမှတ်အပေါ် အခြေခံ၍ အနည်းဆုံးအချက် (၅၀) (93) ရမှတ်များ၊ တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရသူများအတွက် KPSSP (94) နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းဆင်းများအတွက် KPSSP (50) ရမှတ်အမျိုးအစားများ၊
6. ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်နောက်ဆက်တွဲ -1 နံပါတ်စဉ်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရာထူးများမှရာထူးတစ်ခုကိုသာလျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုပြည်နယ်တစ်ခုတည်း (Ankara-Istanbul) လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ရာထူးတစ်ခုထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုထက်ပိုသော (Ankara-Istanbul) အတွက်ရွေးချယ်မှုများကိုလက်မခံပါ။
7. အကယ်၍4/ B မှ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်အနေအထားနှင့်၎င်းတို့အတွက်လျှောက်ထားလိုသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်ရာထူးနှင့်တူညီမှုမရှိပါက4/ B ၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောလက်ရှိရာထူးဝန်ထမ်းရာထူး၊
8. အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိမည်သည့်4/ B စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်အနေအထားတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်နေစဉ်စာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားသောလျှောက်ထားသူများသည်4/ B နှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားသော ၀ န်ထမ်းများရာထူးမှရပ်စဲခြင်းမတိုင်မီတွင်နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာအနေဖြင့်နောက်ဆုံးနှစ်လျှောက်လွှာတစ်ခုပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။